Wararka - Qiimaha kor u kaca ee ku guuleystayaasha API ee rubuca saddexaad ayaa soo jiitay dareen badan
Kordhinta qiimaha ee ku guuleystayaasha API ee rubuca saddexaad ayaa soo jiitay dareen badan
Horumarinta warshadaha API iyo warshadaha dawooyinka waa kuwo aan lakala sooci karin, xitaa iswaafaqsan. Waxaa la fahansan yahay kormeerka deegaanka ee sii kordhaya awgeed, soo saarayaasha API waxay u baahan yihiin inay hagaajiyaan nidaamka ama yareeyaan cabirka wax soo saarka ee xaaladaha asaasiga ah, taas oo horseedi doonta kor u kaca qiimaha API. Intaa waxaa sii dheer, soosaarayaasha walxaha kiimikada ee sare ee API ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato isku mid ah. Kaliya dhowr shirkadood oo API ah ayaa soo saari kara wax soo saarka qaarkood, oo si ujeeddo leh u sameeynaya xaalad oligopoly ah. Kordhinta qiimaha API waxay sidoo kale saamayn ku yeelan doontaa shirkadaha dawooyinka ee hoose. Sida laga soo xigtay warshadaha, qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa kor u kacaysa, shirkadaha hoose ee dawooyinka ayaa si joogto ah u cabanaya, taas oo sidoo kale si toos ah u saameysa daawada bukaanka.
Zou pingming Xinghua shaqadiisu waa isku xirka sare ee warshadaha dawooyinka, wuxuuna aad uga walaacsan yahay kororka qiimaha API. Dhawaan, waxaa la soo sheegay in maamulka kormeerka qiimaha ee Maamulka Gobolka ee kormeerka suuqa uu u wakiishay Ururka Warshadaha Kiimikada ee Shiinaha in ay abaabulaan dood cilmiyeed ku saabsan keenista alaabta ceyriinka ah ee shirkadaha ku shaqada leh si ay uga soo qayb galaan qolka shirarka ee Maamulka Gobolka kormeerka suuqa. Hogaamiyaasha xafiiska kormeerka sicirka iyo xafiiska la dagaalanka monopoly office ee maamulka gobolka ee kormeerka suuqa ayaa si qoto dheer is dhaafsi iyo wada hadal ula yeeshay wakiilada shirkadaha kaqeyb qaadanaya dhibaatooyinka sicirka iyo keenista API.
Kiimikada 'Zouping Mingxing' ayaa xakameyn doonta isbeddelka qiimaha isbeddelka ee API gudaheeda iyada oo lagu jaangooyo siyaasadaha qaranka iyo xeerarka suuqyada adduunka, si loo nadiifiyo loona xasiliyo jawiga suuqa adduunka.